Fokon' i Benjamina - Wikipedia
Fokon' i Benjamina
(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Benjamina)
Ny fokon' i Benjamina dia iray amin' ny foko roa ambin' ny folon' i Israely. Ny anjara tanin' io foko io dia eo anelanelan' ny fokon' i Efraima ao avaratra sy ny fokon' i Jodà ao atsimo, ny fokon' i Dana ao andrefana, ary ny ony Jordana ao antsinanana. Iray amin' ireo foko tao amin' ny Fanjakan' i Jodà ny fokon' i Benjamina.
1 I Benjamina
2 Ny anjara tanin' ny fokon' i Benjamina
3 Foko tao amin' ny Fanjakan' i Jodà
4 Olona isan' ny fokon' i Benjamina
I Benjamina (hebreo: בנימין / Binyamin) dia zanaka faha-13 sady faralahin' i Jakoba. I Rahely no anaran-dreniny. I Jôsefa irery ihany no rahalahy iray reny aminy. Ireto ny zanany lahy: Bela, Bekera, Asbela, Gera, Naamana, Ehy, Rosa, Mopima, Hopima ary Arda (Genesisy 46.21).
Ny anjara tanin' ny fokon' i BenjaminaHanova
Ny anjara tanin' io foko io dia eo anelanelan' ny fokon' i Efraima ao avaratra sy ny fokon' i Jodà ao atsimo, ny fokon' i Dana ao andrefana, ary ny ony Jordana ao atsinanana.
I Jerosalema sy i Jerikô sy i Betela ary i Gibeona no tanàna malaza ao aminy. Tao Rama no teraka ny mpaminany sy mpitsara farany Samoela ka rehefa avy nobeazina tao Silô izy dia nonina tao Rama indray (1 Sam. 7.17) izay voalaza fa misy ny fasany (1Sam. 25.1).
Foko tao amin' ny Fanjakan' i JodàHanova
Taty aoriana dia iray amin' ireo foko tao amin' ny Fanjakan' i Jodà ny fokon' i Benjamina taorian' ny fisarahan' ny Fanjakan' i Samaria tamin' ny Fanjakan' i Jodà.
Olona isan' ny fokon' i BenjaminaHanova
Ny fokon' i Benjamina no nipoiran' i Saoly (na Saola), mpanjaka voalohan' i Israely sy nodimbasan' i Davida. I Abidana no andriandahin' ny fokon' i Benjamina.
Fokon' i Israely: Robena - Simeona - Levy - Jodà - Isakara - Zabolona - Dana - Naftaly - Gada - Asera - Josefa (Manase sy Efraima) - Benjamina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fokon%27_i_Benjamina&oldid=1037438"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 16:33
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 16:33 ity pejy ity.